सपनाको नयाँ जिन्दगी; विहान कलेज दिउँसो श,व व्यवस्थापन…. « गोर्खाली खबर डटकम
बीबीसीको १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेपछि चर्चाको शिखरमा पुगिन् सपना रोक्का मगर। तैपनि उनका केही सपना किनारमै छुटेका थिए। त्यसमध्ये एक थियो पढाइ। त्यही सपना पुरा गर्न उनले पढाइ सुरु गरेकी छन्। उनी काठमाडौंको सुविधानगरस्थित हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजमा कक्षा ११ मा भर्ना भएकी छन्। उनले कानुन विषयमा अध्ययन सुरु गरेको कलेजका कार्यकारी निर्देशक नारायण काफ्लेले बताए।
बेवारिसेको शव व्यवस्थापन गर्ने म्याग्दीकी सपनालाई गत मंसिर ८ गते बीबीसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सामेल गरेको थियो. यो सफलतामा उनी अत्यन्त खुसी थिइन्। तर, उनलाई पढाइ छुटेकोमा उनलाई छटपटी थियो। २०७३ सालमा महेन्द्ररत्न उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेकी सपना सदरमुकाम म्याग्दी गएर व्यवस्थापन विषयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएकी थिइन्। तर, त्यसपछि उनले पढाइ बीचमै छाडेकी थिइन्।
कलेजले सपनालाई नियमित उपस्थिति र बीचमा पढाइ छाड्न नपाइने सर्त राखेको छ। जसमा सहमत भएकी सपना अहिले लगनशील भएर पढिरहेको शिक्षक भट्टले बताए।m‘मेरो पढाइ बिग्रिएको छ, म जसरी पनि पढ्छु भन्ने अठोट सपनामा देखिन्छ,’ शिक्षक भट्टले सुनाए, ‘म जसरी पढ्छु भन्छिन्। उसको मेहनत देखेर म एकदमै खुसी छु।’
बिहान ६ बजेबाट सुरु भएको उनको कलेज १०ः४५ मा बिदा हुन्छ। त्यसपछि घर फर्किन्छिन् र गृहकार्य गर्छिन्। दिउँसोको समय भने बेवारिसे व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ। पहिलेको संस्थाबाट अलग भइसकेपछि अहिले उनले आफ्नै नेतृत्वमा बेवारिसे व्यवस्थापनको काम गर्न संस्था दर्ता गरिसकेकी छन्। पछिल्लोसमय उनी आफ्नै संस्था मार्फत बेवारिसे व्यवस्थापनमा सक्रिय छन्।
अब पढाइसँगै बेवारिसे व्यवस्थापनको काममा खटिने उनी बताउँछिन्। ‘यी दुईवटै विषय मेरा लागि उस्तै हुन्। बेवारिसे व्यवस्थापन जसले मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍यायो, पढाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब सँगै अगाडि बढाउँछु।’ नेपाल खबरबाट
चीनको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कोभिड महामारीको बिचमा ब्यापक गिरावट
पैसाले नयाँ-नयाँ सम्बन्ध बनाउँछ । तर असली र पुरानो सम्बन्धलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ